Mbola tsy fantatra hoe inona ilay artifact lohan'ny zoro?
Angle head dia fitaovana ampiasaina matetika amin'ny milina. Aorian'ny fametrahana ny lohan'ny zoro amin'ny fitaovan'ny milina, ny tsipika fihodinan'ny fitaovana dia azo zoroina amin'ny tsipika fihodinan'ny spindle mba hanodinana ilay sanganasa.
Ny toetra mampiavaka azy sy ny fikorianan'ny masinina fikosoham-bary
Ny milina fanodinana Gantry dia manana fahamendrehana ampy, fahombiazana avo lenta, mora ampiasaina, rafitra tsotra, fampisehoana feno ary toetra hafa.
Fanamboarana ny milina fanodinana Gantry
Fanamboarana torolàlana momba ny milina fanodinana Gantry: ny torolàlana ho an'ny milina dia vita amin'ny vy na vy vy, ity karazana goroditra mpitari-dalana ity dia tokony amboarina, raha tsy izany dia hanao ireo rangotra ireo.
Momba ny milina fanodinana Gantry
Ny milina fanodinana Gantry, fohy ho an'ny fikosoham-bolo, dia rindrin'ny varavarana sy farafara lava misy ny masinina fikosoham-bary.
Ahoana ny fitazonana milina fitotoana gantry
Ny rafitra milina fanodinana Gantry dia misy gantry, gantry dia misy tsanganana roa, andry, hazo mifono, tampon-trano, canopy ary ondrilahy fikosoham-bolo dia rafitra henjana.